Erayga Kaashmiir macnihiisu wuxuu noqonayaa Dhulkii Sacfaraanka.
Mowduuc Muhiima oo ka hadlaya Taariikhda Kashmiir
Waa Wilaayad State ku taal Saqafka sare ee caalamka ama dunida korkeeda . Dhulka waxaa ku goglan doog gees illaa gees . Waxaa dhex mara Webiyo, waxay leedahay kaymo iyo dhir u gaar ah oo aad ugu yar dunida inteeda kale. Kaashmiir waxay caan ku tahay Buuro aad u dhaadheer oo ah silsilad oo ku wareegsan dushoodana waxaa markasta ku sugan daruuro ama baraf. Buurahaas guntooda waxaa ka soo burqada dur durro aan goin. Dhagxaanta buuraha iyo hawada Kaashmiir guud ahaan waxay u carfaan sida geedka Sacfaraanka . waxaana lagu tilmaamaa meesha adduunka ugu qurux badan. Heer ay Juqraafiyahannadu yidhaahdeen tani waa jannadii Alleh ee dhulka. Laakiin Muslimiinta reer Kaashmiir marna kuma negaanin nabadgelyo. Jannadiina waxay isu beddeshay Jaxiima. Marar badan bay cadawga Hinduugu ku duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaan Miiraajka muslimiinta reer Kaashmiir.
Pakistan oo iyadu saamayn weyn ku leh arrinta Kaashmiir may lahayn awood sidaa u badan oo ay ku difaacdo Kaashmiir ka hor intaanay samaysan Gantaalaha Nukliyeerka ee meesha fog wax ka dila.
Pakistan iyo India markay xornimada ka qaateen gumaysigii Ingiriiska sannadkii 1947kii waxaa bilaabmay colaad soo jireen ah oo ka dhaxaysay labadaas waddan.
Pakistan oo ah waddanka ugu xoog badan dhammaan waddamada Islaamka xagga Milleteriga iyo India oo iyana ah wadanka labaad ee ugu xoog badan xagga Milletetriga dhammaan dunida seddexaad marka laga reebo Shiinaha oo kaalinta koowaad kujira . labadaas waddan ee cududda intaas leeg leh ayaa marar badan iskaga horyimid gacan ku haynta dhulka Sacfaraanka .
Pakistan waxay ku guuldarrysatay xoreynta Kaashmiir seddex dagaal oo aad loogu hoobtay khasaarahoodiina aan marna la illaawi Karin kuwaas oo kala dhacay sannadadii 1948, 1965, 1971. Dagaalkii ugu xumaana wuxuu dhacay 1971kii kaasoo ay Pakistan ku weyday qayb dhulkeedii ka mid ah. Bariga Pakistan ayaa intay goeen noqday waddanka manta loo yaqaan Bangaledhesh.
Xaaladduna waxay gaadhay heer ay labada waddan isu samaystaan hubka Nukliyeerka oo ay immika diyaarsadeen . Pakistan waa waddankii ugu horreeyey ee Islaam ah ee si fiican u dhammaystira gantaalaha Nukliyeerka .waxayna ku biirtay ururka waddamada iska leh awoodda Nukliyeerka . waxaana la diiwaan geliyey bishii may 1998kii , markay si kedis ah oo yaab leh ay hawada sare ugu tijaabisay gantaalaheeda Nukliyeerka.
Adduunyadu markay indhaha ku kala qaadday dhacdadaas taariikhiga. Raiisal wasaarihii hore Mr, Nawaz Sheriff ayaa ka baqay hanjabaad kaga timaadda beesha caalamka. Markaasaa wasiirkiisii arrimaha debadda Mr, Sartaj Aziz uu si geesinimo leh ugu dhawaaqay inay tahay guushani mid dhoollatus ku ah kuwa cadawga ku ah Pakistan. Adduunyaduna waxay ku tilmaantay Nukliyeerka labadaas waddan Nukliyeerkii Diimaha. Waxaana immika lays weydiinayaa goorta uu dhacayo dagaal afraad oo lagula kala wareegayo Dhulka Sacfaraanka . Kaa soo laysu adeegsan doono Qumbuladaha Nukliyeerka.
Kaashmiir waxay u qaybsan tahay laba qyabood oo ay kala haystaan India iyo Pakistan. Bolkiiba shan iyo lixdan waxay ku jirtaa gacanta cadawga Hinduuga , caasimadeeduna waa Srinagar . Boqolkiiba shan iyo soddonna waxay hoos timaaddaa Pakistan. Waxaana loogu yeedhaa Kaashmiir Asaad ama Kaashmiirta Xorta ah . caasimadeeduna waa Mufdhir Abaad . Kaashmiir waxay ku fadhidaa guud ahaan dhul dhan 222000KM . oo wareeg ah. Buuraha Kaashmiir dhererkeedu wuxuu gaadhaa 8000m. Barwaaqda Allah siiyey Kaashmiir waa mid dabiici ah isla markaana joogta ah . Qof kasta oo tagaana wuxuu ku dhawaaqaa Tani waa Jannadii Alleh ee dhulka.
Meelaha qaarkood xilliga jiilaalka qabowgu wuxuu gaadhaa -30 soddon derejo oo sentigiraydh ah ayuu eber ka hoos maraa . Xilliga xagaagana intaa in ka badan ayuu sare u kacaa kulaylku . Boqolkiiba toban waa kayn jiq ah. Webiyada hareerahooda waxaa ka baxa dhir laga sameeyo qalabka guryaha IWM. Waxaa kaloo ka baxa Khudaarta nooc walba waxaa kale oo laga beeraa Cudbiga, Bariiska, Qamadiga, digirta iyo waxyaabo kale oo muhiim ah. Kaashmiir waxaa ku yaal wershedo lagu habeeyo waxyaabaha dabiiciga sida Dunta, Lacagta Iyo Looxaanta . Magaalada Srinagar ee uu ka taliyo cadawga Hinduugu waxaa ku taal wershed diyaarisa Xariirta iyo Suufka. Waxayna ka mid tahay warshadaha ugu waaweyn caalamka ee sameeya Xariirta.
Qaar ka mid ah Taariikhyahannadu waxay sheegeen in Sayidinaa Adam Calayhi Salaame uu ka dagay Kaashmiir maalin maalmaha ka mid ah!!!
Muslimiinta reer Kaashmiir waxaa lagu qiyaasay tiro dhan 12 Malyuun. Toddoba Malyuun waxay ku nool yihiin dhinaca Hinduugu gumaysto. Shan Malyuunna dhinaca xorta ah ee Pakistan . Waxayna Muslimiintu nqonayaan guud ahaan boqolkiiba shan iyo siddeetan . halka kuwa aamminsan waxay Hinduugu caabudaan ay yihiin boqolkiiba shan keliya.
Islaamku wuxuu gaadhay Wilaayadda Kaashmiir dhamaadkii qarnigii koowaad ee taariikhda Hijrada . Qarnigii siddeedaad ee Hijradana waxaa Kaashmiir Amiir ka noqday Daacigii la odhan jiray Belbel Shaah . Waxayna yeelatay boqortooyo xoog badan oo Islaam ah . waxayna soo martay Wilaayaddu dhibaatooyin fara badan iyo weerarro joogta ah . Nasiib wanaag xilliyadaas Mslimiintu mar walba way guulaysan jireen. Illaa laga soo gadhay waqitigii gumaysigii Ingiriisku uu qabsady inta badan Qaaradda Asia. Wuxuuna bilaabay siyaasaddii foosha xumayd ee uu kaga soo horjeeday Islaamka. Xilligaas oo ay dadku haysteen ilbaxnimo iyo horumar balladhan. Waxayna kasbadeen inay luqaddooda ku qoraan xuruuf Carabi ah qarniyaal badan ka hor.
Kontankii sannadood eeu dambeeyey iska horimaadyadii iyo halaaggii ka dhacay Kaashmiir waxaa loo sababaa shiqoolladii uu dhigay ingiriisku waqtigii uu gumaysanayey guud ahaan dhulkaas.
Dadka u dhuun daloola arrimaha Kaashmiir wxay ku sifeeyeen Falastiinta India.
Ururka raabidada Islaamka ayaa shirweynihii seddexaad ee lagu qabtay magaalada Makka Al Mukkarrama u soo jeediyey dhammaan Boqorrada iyo Madaxweynayaasha Muslimiinta in ay ka codsadaan Ururka Ummadaha Midoobay , inay soo saaraan goaan gaar ah oo xaq u siinaya Kaashmiir dhinaca hinduugu gumaysto in laga qaado Afti si aayahooda uga tashadaan. Cadawga hinduugu isagoo taa ka baqaya ayuu shacbiga reer Kaashmiir kala dagaallamay ku dhaqanka Islaamka iyo inay ka hoos baxaan gumeysigiisa. wuxuu beddelay manhajkii tacliinta. Dhallinyarada waxaa loo soo bandhigay waxyaabo aad u xunxun. Wxaa lagu dhiirri geliyey inay guursadaan Haweenka Hinduuga iyo inay khamriga u cabbaan si xad dhaaf ah .
Muslimiintuna waxay sii adkeeyeen dagaalkoodii diiniga ahaa oo ay kula Jihaadayeen cadawga Hinduuga.
Hayadaha caalamiga ah ee hadla xuquuqda insaanku waxay sheegeen in xadgudubyada ka dhaca Kaashmiir aanay ka jirin Dunida inteeda kale Sannadkii 1981kii waxaa la dilay Badhasaabkii Muslimiinta Kaashmiir Maxammed Faaruuq. Dad badan oo ka qayb galayey aaskii Shahiidka Hoggaamiyaha ahaa, ayey cadawgu ku fureen Rasaas aan loo aabba yeelin waxaana goobtaas ku hoyday shan boqol Muslimiin ah.
Sannadkii 1990kii, bilo yar gudahood waxay dileen cadawga Hinduugu shan kun oo qof. Tiro intaa leegna way dhaawceen. laba iyo toban kunna Xabsiga ayey u taxaabeen. Qaar kale oo badanna waxay u firxadeen waddamada jaarka ah oo ay qaxooti ku noqdeen. Sannadihii intaa ka dambeeyeyna waxay hayaduhu caddeeyeen in ugu yaraan Shan iyo toddobaatan kun oo qof lagu dilay Kaashmiir, Tiro intaa ka badanna loo geystay dhaawac culus iyo curyaannimo tiro seddexaad oo kalena xabsiga ciqaabta laga buux dhaafiyey. waxaa kaloo la sheegay in haween muslimiin ah oo ka badan laba iyo toban kun si Jamaaci ah ama wadaag ah loo kufsaday. Waxaa Dab la qabadsiiyey oo Dambaska laga dhigay in ka badan Afartan kun oo guri.
Kaashmiir waxaa ku sugan Ciidan lagu qiyaasay 750,000 oo Hindi ah. Oo la soo xulay si gaar ahna loo tababaray.
Muslimiintu guud ahaan aqoon fiican uma laha wax badanna kalama socdaan waaqaca ka jira Kaashmiir. Waxaana sbab looga dhigay laba arrimood
1 . Waddamada Carabta gaar ahaan kuwa Betroolka hodanka ku ah , waxay xidhiidh ganacsi iyo mid siyaasadeedba la leeyihiin Dawladda dhexe ee magaalada Delhi, Sawirka Kaashmiirna waxay ka qaataan dhinaca India oo keliya.
2 . Luqadda rasmiga ah ee Kaashmiir waa English iyo Urduu . Luqadda carabigana dad aad u yar baa ku hadla .
Sabaahan iyo kuwa kale ayaa waxay ka dhigeen in Kaashmiir laga barto oo keliya Xayeysiiska dharka Quruxda badan ee laga sameeyey Xariirta dabiiciga ah ee ay dushooda ku qoran tahay Pure Kashmir Wool macnaheeduna tahay Suufkii Kaashmiir oo Saafi ah .
Hore waxaynu u soo sheegnay in Kaashmiir qaybta Hinduugu gumaysto ay ku yaallaan wershado caalami ah oo lagu sameeyo Xariirta iyo Lacagta .
Waxaan shaki ku jirin in cadawga Hinduugu ay dhaqaale badan ka helaan kheyraadka dabiiciga ah ee Kaashmiir.
Culimada iyo waxgaradku marna kama daalaan ku baraarugga iyo mitidnimada Islaamka
Kaashmiir waxaa ku yaal dhawr boqol oo Masaajid iyo Macaahiddo iyo Xarumo kale oo diinta lagu barto . Waxaana ka jira in ka badan shan iyo toban Jabhadood iyo siddeed Axsaab siyaasi oo xor ah .
Waxaana kamid ah .
Ururka Islaamka .
Ururka Ardayda ee Islaamiga ah .
Ururka Hablaha Ardayda Islaamka .
Ururka Ardayda Carabta .
Uurka Midawga Culimada iyo Shuyuukhda �Guurtida .
Ururka Ustaadada �Macallimiinta .
Ururka Haweenka Muslimiinta .
Daladda Saaxiibbada Islaamka .
Ururka Mujaahidiinta Muslimiinta Kaashmiir .
Dhaqdhaqaaqa Muslimiinta Kaashmiir .
Xisbiga Jihaadka .
Waxaa kale oo jira Rag naftoodii , Maalkoodii iyo Waqtigoodiiba u huray Xoraynta Kaashmiir.
1 . Boroofisoor Aliif- Addiin Al Turaabi . ku xigeenka Amiirka Ururka Islaamka Kaashmiirta Xorta ah .
2 .Al Sheekh Sayid Ali Al Jiilaani . Guddoomiyaha Dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah ee Kaashmiirta la haysto .
3. Qulaam Saafi . Amiirka xisbiga Mujaahidiinta .
4. Suldaan M axamuud Shoodri . Madaxa Raabibdada Ddhaqdhaqaaqa Kaashmiir
5. Sardaad Ibraahim Khaan . Guddoomiyaha Midnimada Jamhuuriga ah .
6. Jeneraal Maxammed Xayaat Khaan iyo Sardaad Adelqayuum oo ladooduba ahaan jiray Guddoomiyeyaashii hore ee Kaashmiirta Xorta ah .
7. Abdirashiid Al Turaabi . Guddoomiyaha ururka Islaamiga ah .
8. Maxammed Faaruuq Raxmaani . Guddoomiyaha Dhaqaqaaqa Xoreynta Kaashmiir iyo Maxammed Ashraaf Sarraaf oo isna ka mid ah Hoggaamiyeyaasha Dhadhaqaaqa Xoreynta .
9. Sharciyaqaan Miir Khoorashiid oo madax ka ah Hayadda loo yaqaan Saday Asaadi ama Codka Xorta ah waana hayad u doodda Xuquuqda Insaanka.
10. Sardaad Catiiq Axmed Khaan . Xoghayaha guud ee Golaha muslimiinta Kaashmiir Waxaana dhalay Mujaahidkii Koowaad ee Kaashmiir. Sardaad Abdulqayuum.
11. Dr, Qulaam Baani fay . Guddoomiyaha Machadka Culuumta Siyaasiga ah ee Washington.
12. Iskander Xayaan Khaan oo mar madax ka ahaa Golaha Wasiirrada ee Kaashmiir .
Waxaan marar badan la kulanaa iyadoo laga hadlayo Xasuuq iyo dhibaatooyin badan oo loo geysto Muslimiin badan oo jooga daafaha dunida, sida Jeejniya, Kosovo, Bosniya, Filibbiin iyo Meelo kale. Sidaas darteed Ayaan ummadda Soomaaliyeed u soo gudbiyey waxyaabaha ka socda Dhulka Sacfaraanka, Jannada Alleh ee dhulka , Falastiinta India oo dhammaantood ku magac dheer Kaashmiir.
N.B . Waxaa kale oo jirta Wilaayad ay Muslimiintu leeyihiin oo lagu magacaabo Jaamo, balse ay cadawga Hinduugu Gumaaystaan . Wilaayaddaas oo lagu lammaaneeyo Marka laga hadlayo Kaashmiir.
Dhawr Wiig ka hor waxaan ka daawaday Telefishanka BBC World banaamij naxdin badan oo cinwaan looga dhigay KASHMIR PARADISE LOST.
Maqaalkan waxaa laga soo tabiyey Qaahira , Riyaad iyo Islaamabaad.
Waxaana soo tarjumay Muxyadiin Cabdillaahi Jaamac
Faafin: SomaliTalk Oct 23, 2003